बलात्कारको समाजशास्त्र | हुलाकी अनलाइन
Posted By: Hulaki Onlineon: In: bichitra, viewNo Comments
दिपक भट्टराई, कावासोती , नवलपुर
हत्या, चोरी र बलात्कार जस्ता अपराधहरु मानव सभ्यता जत्तिकै पुराना हुन् । कुनै न कुनै रुपमा यी अपराधहरु समाजमा घटिरहेका हुन्छन् । समाज र समय सापेक्ष अपराधका किसिम र प्रकारहरु भिन्न भिन्न हुन्छन् । तर यी तीन अपराधहरु प्रत्येक समय र समाजमा अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । फरक यत्ति हो, कुनै समय र समाजमा यस्ता अपराधहरुले विकराल रुप लिएका हुन्छन् भने कुनै समय र समाजमा यी अपराधहरु नगण्य हुन्छन् । तर हुन भने जहा“ पनि हुन्छन् ।
समाज रहेसम्म सामाजिक समस्याहरु, विकृतीहरु र अपराधहरु कुनै न कुनै रुपमा समाजमा रहिरहन्छन् । यो शास्वत सत्य हो । यस्ता अपराधहरुलाई हटाउन समाज राज्यले प्रयास गर्दछ, तर जति नै प्रयास गरे पनि यी अपराधहरुको पुर्ण उन्मुलन सम्भव हु“दैन । हामीले गर्न सक्ने भनेको न्युनीकरण मात्र हो । जब यी अपराधहरुले हद पार गर्दछन् , तब समाजको शान्ति, सुव्यवस्था र विकास नै असन्तुलन भैदिन्छ । तसर्थ, राज्य यस्ता अपराधहरुको न्युनीकरणका लागी समयानुकुल कानून बनाउ“दछ र लागु गर्दछ । अविकसति देशहरुमा मात्र नभएर विकसित र सभ्य भनाउ“दा देशहरुमा पनि बलात्कारका घटनाहरु प्रशस्तै घट्ने गरेका छन् ।
सन् २०१८ को एउटा तथ्याकं हेर्ने हो भने अमेरिका, बेल्जियम, स्वीडेन, दक्षिण अफ्रिका, अस्टे«लिया जस्ता मुलुकहरु बलात्कार हुने टप टेन मुलकु भित्र पर्दछन् । अविकसित मुलुकहरुमा बलात्कारका घटनाहरु सजिलै बाहिर नआउने र बिकसित मुलुकहरुमा महिला चेतना÷शिक्षा÷मिडियाको पहु“च÷ बलियो कानूनी व्यवस्था कारण बलात्कारका घटनाहरु सजिलै बाहिर आउने हु“दा अबिकसित मुलुकहरुमा भन्दा विकसित मुलुकहरुमा बलात्कारको तथ्याकं बढी देखिएको हुन सक्छ । भारत, नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाली रुढीवादी देशहरु, अफ्रिकन देशहरु र महिलाको स्वतन्त्रता माथि अनेक बन्देज लगाइएका अरबी मुलुकहरुमा जति बलात्कारका घटना घट्छन्, ती सबै बाहिर आउ“दैनन् ।
बलात्कारको परिभाषा र यसको व्यापकता प्रत्येक राज्यको कानून अनुसार बेग्लाबेग्लै हुने गर्दछ । समयस“गै यसको परिभाषामा पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । सामान्य अर्थमा बलात्कार भनेको महिलाको सहमति बिना कुनै पुरुषले उक्त महिलास“ग यौन सम्बन्ध राख्ने कार्यलाई जनाउ“छ । बलात्कार भन्ने बित्तिकै पुरुषले महिलाका बिरुद्ध गर्ने दुष्कार्य भन्ने बुझ्दछौं । बलात्कारको कार्य गैरकानूनी मात्र नभएर अति अनैतिक र असामाजिक कार्य पनि हो । बलात्कार महिलाको आत्म सम्मान बिरुद्धको निकृष्ट कार्य हो । मानव अधिकारको घोर उल्लंघन हो । अहिले आएर नेपाल लगायत बिभिन्न देशहरुले वैवाहिक बलात्कारलाई समेत बलात्कार मानी अपराधीकरण गरी दण्डनिय बनाएको छ ।
उमेर पुगेको पुरुषलाई महिलाप्रति र महिलालाई पुरुषप्रति आर्कर्षण हुनु र यौनको चाहना जाग्नु अत्यन्त स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । यौन जैविकीय र मानसकि दुबै आवश्यक्ता हो । मानव सभ्यताको आदिमकालमा यौन स्वछन्दता थियो । जुन समयमा परिवार, विवाह, नातेदारी, समाज र राज्यका अवधारणाहरुको विकास भएको थिएन, सो समयमा मानिसहरु झुण्ड झुण्ड बनाएर हिंड्थे र जोस“ग पनि यौन सम्बन्ध रहन सक्थ्यो । बिस्तारै विवाह, परिवार, नातेदारी, समाज जस्ता सामाजिक संस्थाहरुको विकास हु“दै गयो । समाजलाई अराजकताबाट जोगाउन, सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन बिभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाहरुको संस्थाहरुको विकास हु“दै गए । यी संस्थाहरुको विकास“गै यौन सम्बन्ध र कार्यलाई पनि नियन्त्रण र नियमित गर्न थालियो । विवाहको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कार्य नै व्यक्तिको यौन चाहना-आवश्यक्तालाई सामाजिक दायरा भित्र रहेर पुरा गराउनु हो ।
विवाह, परिवार, नातेदारी लगायतका सामाजिक व्यवस्थाहरुले यौन कार्यलाई निश्चित नियमहरुको दायरामा ल्याइदिएका छन् । समाजमा व्यक्तिका कार्यहरुलाई नियमित गर्ने अर्को महत्वपुर्ण संस्था भनेको धर्म हो । धर्मले पाप र पुण्यको, नर्क र स्वर्गको अवधारणाको विकास गर्यो । लामो समयसम्म मानिसका कर्मलाई धर्मले नियमित गरको हो । राज्यको उदयस“गै बिस्तारै कानूनको उत्पत्ती र विकास हुन थाल्यो । शुरु शुरुमा धर्म नै कानूनको स्रोत थियो । मानवसमाज परिवर्तनको गतिमा अगाडि बढ्दै जाँदा समाजमा धर्म र नैतिक मुल्य मान्यतामा ह्रास आउन थाल्यो, तब समाज नियन्त्रण्का लागी राज्य निर्मित कानूनहरु बलिया हु“दै गए । आज हाम्रो सामु देखिएको आधुनिक राज्यको विकास एकै चोटि भएको हैन । आज समाजमा व्यक्तिका कार्य, गतिविधिहरुलाई धर्म र नैतिकताका सिद्धान्तहरुले बाँधन सक्दैनन् । तसर्थ, राज्यले बलात्कार जस्ता अपराधका बिरुद्ध मृत्युदण्ड सम्मका कानुनहरु बनाएका छन् । तर पनि बलात्कारका घटनाहरु उस्तै छन्, हिजो पनि थिए, आज पनि छन् । किन त ?
बलात्कारको कारक स्वयं मान्छे हो । बलात्कार यस्तो घटना हो, जो समाज भन्दा पनि पुरानो छ । किनभने बलात्कार हुनका लागी समाजको आवश्यकता पर्दैन । बलात्कार किन हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई बिभिन्न तरिकाले उत्तर दिन सकिन्छ । मनोविज्ञानवादी बिशेष गरी फ्रायडवादीहरुको भनाइ अनुसार मस्तिष्क ईद, इगो र सुपर ईगो गरी तीन भागमा विभाजित हुन्छ । ईद आनन्द खोज्ने मस्तिष्कको खण्ड हो । ईगोलाई मस्तिष्कको कार्यकारी भाग मानिन्छ । सुपर ईगोले आर्दशको कुरा गर्दछ । ईगोको काम ईद र सुपर ईगोलाई सन्तुलनमा ल्याउनु हो । जब इगोले ईदलाई नियन्त्रण सन्तुलनमा राख्न सक्दैन र मस्तिष्कमा ईद हावी हुन्छ, तब व्यक्ति बलात्कार गर्न पुग्छ । किनभने ईदको काम भनेकै आनन्द खोज्नु हो । के ठिक र के बेठिक हो, ईदले यी कुरा जान्दैन ।
समाजशास्त्रीहरु बिशेष गरी प्रकार्यवादी समाजशास्त्रीहरुका अनुसार बलात्कार परिवार र समाजमा व्यक्तिको अपुर्ण, त्रुटीपुर्ण र अप्रर्याप्त सामाजिकीकरणको परिणाम हो । व्यक्तिले आफ्नो समाजका सामाजिक सांस्कृतीक मुल्य मान्यताहरुलाई पुर्ण रुपमा सिकेर आत्मीकरण गर्न सक्दैन, तब उ बलात्कार जस्ता अनैतिक कार्यहरु गर्न पुग्छ । धर्मशास्त्रीहरुका अनुसार समाजमा धर्मप्रतिको आस्था खस्किंदै जानु र नैतिक रुपमा समाज स्खलित हुनुका कारण बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका हुन् । पुजीवादमा बिश्वास नगर्नेहरुले पुजीवादलाई महिला हिंसाको कारक ठान्दछन् । धेरै हदसम्म यो तार्किक देखिन्छ । आजको आधुनिक पुजिवादी समाजले महिलालाई ‘माल’ मान्दछ, या माल बिकाउने माध्यम ठान्दछ । चलचित्रहरु, टि.भि. सिरियलहरु, विज्ञापनहरु, फेशन शोमा महिलाहरुलाई बस्तुका रुपमा चित्रित गरिएको छ । महिलाहरुलाई यौन आनन्दका बस्तुका रुपमा चित्रण गरिरह“दा यसले हुर्कदैं गरेका बालबालिकाहरु र युवावर्गमा महिलाप्रति हेर्ने धारणामा नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । अधिकार र समानताको सेतो पर्दाभित्र महिलाहरुलाई ‘माल’ बनाएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गरिरहेको छ पुँजीवादले ।
राज्य कमजोर हुनु, राज्यमा अराजकता, युद्ध, गृहयुद्ध, बिद्रोह, आतंक भएको अवस्थामा पनि बलात्कारका घटनाहरु बढ्दछन् । राज्यको कमजोर फौजदारी न्याय प्रणाली र व्याप्त दण्डहीनताले बलात्कारलाई मलजल गर्दछ । समाजमा व्याप्त अन्धबिश्वास, रुढीवाद, महिलाप्रति भएका बिभिन्न बन्देजहरु, बेरोजगारी, अव्यवस्थित शहरीकरण आदि पनि बलात्कारका लागी जिम्मेवार छन् । मदिराको अनियन्त्रित बिक्रि र सेवन पनि जिम्मेवार छन् । व्यक्तिका यौन चाहना पुरा गर्ने पर्याप्त माध्यमहरु समाजले निर्माण गर्न नसक्दा पनि बलात्कारका घटनाहरु बढेका हुन् । यौन चाहना स्वाभाविक हो । व्यक्तिले आफ्नो यौन चाहना पुरा गर्ने माध्यमहरु खोजिरहेको हुन्छ । समाजमा यस्ता बैध माध्यमहरु कम छन् । र मानिस बलात्कारको गलत बाटो रोज्न पुग्दछ । तर बालबालिका, आफ्नै सन्तान र बृद्धामाथि हुने गरेका बलात्कारका घटनाहरु भने कुनै पनि तर्कले पुष्टि गर्न सक्दैन ।
यस्ता बलात्कारीहरु अपराधी मानसिकताका मनोरोगी हुन् । यस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्दछ । ईदको प्रभावमा आइ आफ्नो होशलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा मानिस क्षणिक आनन्दका लागी बलात्कार गर्न पुग्दछ । आधुनिकीकरण, शहरीकरणले गर्दा व्यक्ति भिंडमै एक्लो हु“दै गएको छ । मानिसमा सामुहिकता-सम्बन्ध-आफ्नोपन हराउ“दै गएको छ । मानिस भित्रको संवेदना हराउ“दै गएको छ । आज मान्छे स्वयं मेशिन रोबोट भएको छ र अर्को मानिसलाई पनि उ मेसिन रोबोट ठान्न थालेको छ । मेसिन रोबोटले भावना र संवेदना बुझ्दैन ।
बलात्कार न्युनीकरणको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यस्ता घटनाहरु सजिलै बाहिर नआउनु हो ।
पिडितको र पिडित परिवारको समाजमा मान सम्मान ईज्जत प्रतिष्ठामा आघात पर्ने, पिडितको विवाह नै नहुने तथा घरजममा असर पर्ने र अन्य सुरक्षा लगायतका कारणहरुले गर्दा धेरै बलात्कारका घटनाहरु गुपचुप रहन्छन् । राज्यको प्रहरी प्रशासन, अभियोजन पक्ष र समग्र फौजदारी न्याय प्रणाली माथि जनताको बिश्वास नहुनुले पनि पिडितहरुले आफुमाथि भएका बलात्कारका घटनाहरुलाई गुपचुप नै राख्न रुचाउ“छन् । बलात्कारको घटना बाहिर आयो भने आफुलाई जीवनभर त्यही घटनाले डसिरहने, समाजमा पुर्नस्थापित हुन अत्यन्तै जटिल हुने र जीवनभर लान्छित भैरहनुपर्ने हुदा पिडितहरु अरुलाई थाहा नहोस् भन्न रुचाउ“छन् । मिडियाहरुले पनि अतिरञ्जित गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने हु“दा पिडितलाई नै थप पिडा पुग्न जान्छ । अपराधीले त एक पटक बलात्कार गर्दछ, तर यो समाज,राज्य, मिडियाले पटक पटक बलात्कार गर्ने हु“दा सोही डरले घटनाहरु लुकाउनुमा नै पिडितहरु हितकर ठान्दछन् ।
अब समाधान के त ? पुर्ण उन्मुलन त सायद सम्भव नहोला । बलात्कारलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ । बालबालिकालाई सानैदेखि आर्थिक प्रगतीको शिक्षा स“ग स“गै नैतिकता, मर्यादा, सद्आचरणको शिक्षा दिन आवश्यक छ । स्कुल कलेजहरुमा पनि नैतिक मुल्य मान्यता तथा कानूनी ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा राख्नु पर्दछ । घर परिवार ,स्कुल, छरछिमेकले बालबालिकाका आचरणलाई ‘वाच’ गर्नु पर्दछ । समाजमा व्याप्त रुढीवाद हटाउनु पर्दछ । महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने धारणालाई व्यवहारमा नै लागु गर्न सक्नु पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा व्यक्ति स्वयं आत्म अनुशासित र नियन्त्रित हुनु पर्दछ । यसका लागी सही सामाजिकीकरण आवश्यक पर्दछ । राज्य, फौजदारी न्याय प्रणाली, अनुसन्धान र अभियोजन सबल बन्नुपर्दछ ।
समाजमा व्याप्त दण्डहीनता हटाउनु पर्दछ । मदिरा बिक्री र सेवनलाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ । बेरोजगारी लगायतका समस्याहरु हटाउनु पर्दछ । हाम्रो सोंचमा आमुल परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अपराधीलाई कठोर दण्ड दिनु पर्दछ । महिलालाई मालका रुपमा चित्रित गर्ने पुजीवादको सोंच र चिन्तनलाई परिमार्जन गरी महिलाको आत्मसम्मान, क्षमता र बौद्धिकतालाई उचित भुमिका प्रदान गर्ने अर्थव्यवस्था बनाउनु पर्दछ । विज्ञापनका शैलीहरु परिवर्तन गरिनु पर्दछ । यौन चाहना पुरा गर्नका लागी पर्याप्त विकल्पहरुको निर्माण समाजले गर्नु पर्दछ ।
छोरीहरुलाई सानैदेखि शारिरिक र मानसिक रुपमा बलियो बनाउनु पर्दछ । आत्मसुरक्षाको तालिम दिनु पर्दछ । राज्यले जतिसुकै बलियो शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाए पनि अपराधहरु हुन सक्ने भएकाले आफ्नो सुरक्षाका लागी आफै पनि सचेत हुनु पर्दछ ।
जोकोहीलाई पनि बिश्वास गर्ने, जहा“ पनि एक्लै हिंड्ने गर्नु हुदैन । धेरै जसो बलात्कारका घटनाहरु चिनेजानेकैबाट हुने गरेको तथ्याकंले बताउ“दछ । तसर्थ, नजिकको व्यक्ति हो वा साथी हो भन्दैमा ढुक्क भैहाल्नु पनि हुदैन । मिल्ने साथीकै स“गत÷कारणले बलात्कारका घटनाहरु घटेका छन् । शंकास्पद व्यक्तिको बिश्वास गर्नु हुदैन, ठाउ“मा जानुहु“दैन । भड्किलो पहिरनलाई जोड दिनु हु“दैन । आफ्नो सुरक्षाका लागी सबै भन्दा धेरै सचेत आफै हुन आवश्यक हुन्छ । सबै सचेत होऊ“..(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
आजबाट दशैं सुरु, आज घटस्थापना, नवरात्रभर पूजापाठको यस्तो छ रित
गैडा संरक्षणका लागि राइनो गोल्डकप
ब्वायफ्रेण्ड नखोजिदिएको भन्दै अदालतमा !